Semalt Zano: Kuipa Kwaiitwa Nema Black Hat SEO Inotarisa Kufanana Uye Nzira Yokudzivisa Sei?
Bhizimisi rako ndiro mararamiro ako, uye haufaniri kupinda mune zvisiri pamutemo zvinogona kuparadza mukurumbira wako paIndaneti. Kuwana nyanzvi yeSEO yakanaka, asi iwe unofanirwa kuve nechokwadi chokuti haashandisi maitiro matsva e SEO kuisa webhusaiti yako mu injini dzekutsvaga . Chimwe chezvikanganiso zvakakosha vanhu vanoita ndezvokuti vanoshandisa mari yakawanda pamakambani eSeO vasingazivi kunyange kana nzvimbo dzavo dziri kuwana magetsi asina kunaka kana kuti hits.
Michael Brown, mutungamiri wekutungamirira we Semalt , anotsanangura pano kuti ungadzivise sei kukanganisa uku kwakaipisisa.
Zviripo zvinoputika uye tsvuku tsvuku SEO
Zvakachengeteka kutaura kuti zvinyorwa zvinokonzerwa nekuputika uye tsvuku tsvuku SEO zvakabatanidzwa kune mumwe - autoremont oü. Kugadziriswa kwehutano kunoreva kuti uri kushandisa chinyorwa cheumwe munhu usingashanduri mazwi uye zvinoreva. Mwedzi mishoma yapfuura, yakawanda software uye mapurogiramu zvakagadzirwa izvo zvinoita kuti zvive nyore kune vanyori kutsvaga zviri mukati. Rega ini pano ndikuudze kuti ihomwe tsvuku yeSeO maitiro uye haigoni kukupa mhinduro inoda. Kana iwe uri kuvhara mazwi ezvinyorwa uye uchinongedza zvinyorwa nguva dzose, kune mikana yokuti nzvimbo yako ichavharidzirwa kana kupomerwa nemajini ekutsvaga kunyanya Google.
Ko tsvuku tsvuku SEO yakaipa here?
Zvinosuruvarisa, chifukidzo chetsvuku SEO hachikwanisi kukupa chero rubatsiro.Hakaipa kusvikira usingazvioni pane zvaunowana pawebsite yako. Asi kana uchida kukura bhizinesi rako paIndaneti, haufaniri kuwana iyo inobatanidzwa mumashamba matsvuku e SEO.
Pane zvakawanda zvinovhenekera zvehomwe yeropa guru SEO, uye nyanzvi dzinoziva kuti chii chaunofanira kuita kuti uvandudze nzvimbo yekutsvaga injini yewebsite. Pasinei nokuti iwe unoshandisa iyo nzvimbo yakakosha kana subdomain, chikwata chetsvuku SEO hachisi chakanaka kuenda nemutengo upi zvawo. Iwe haufaniri kuumba zvisinganzwisisiki kumashure uye haufaniri kuvhara mazwi acho sezvo anogona kubvisa nzvimbo yako pasina nguva.
Kudzokorora kwezvinyorwa hazvisi zvakanaka
Kungofanana nekugadzirisa kunyorera, kunyorwa kwezvinyorwa hakusi tsika yakanaka. Izvo zvave zvichicherechedza kuti vadzidzi vanobatanidzwa mukuzvipira mabasa uye vanoedza kudzokorora zvinhu zvakawanda nokuda kwemari. Havatombozivi kuti vangadzivisa sei kukanganisa uye zvikanganiso zvegiramatic mumapato avo. Kana wakabuda kunze kwekunyora kwako basa rokunyora, iwe unofanirwa kuve nechokwadi chokuti anonyora zvinyorwa zvakasiyana-siyana uye hakuna ma grammatical kana mapepa emapelenzi. Kunyanya, Chirungu chavo chinofanira kunge chiri pamusoro pechiratidzo kana chinangwa chenyu ndechevanhu vepasi rose. Kuverengazve nyore kunorambidzwa zvachose neGoogle nedzimwe injini dzekutsvaga. Nokudaro, iwe unofanirwa kuva nechokwadi chokuti iwe unopa vateereri vako chimwe chinhu chinokosha uye chinobatsira kuverenga. Edza kuzvibatanidza nehuwandu hunogadzirisa uye urege kudzivisa basa rako.
Hapana chinhu chiri nani pane kuva newebsite nehutano hwehutano uye yakanakisisa yekutsvaga injini. Asi nokuda kweizvi, iwe unofanirwa kushanda zvakaoma uye kubhadhara zvakanyanya kuhutano hwehutano hwako uyewo maitiro ako SEO. Pasinei nokuti uri kutarisira bhizinesi rakagadziriswa kana uri mutsva, haufaniri hako kunyora zvinyorwa zvevamwe uye usapindira mune mhando dzemafu SEO maitiro.